Savanah S က?
1 months ago2တစ်နှစ် #1316 by [email protected]
အားလုံးနှင့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာခရစ္စမတ်မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ အကြံပြုချက်များရှာဖွေနေပါ။ ငါကအပေါ်ရဖို့ကြိုးစားသည့် Savanah အက်စ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထင် P3d V4 ... ငါ့အ loading အခါတက်ပြသရန်မရနိုင်သလား P3d? ငါအသစ်ဖြစ်ကြောင်းကို P3d နှင့်ဖြစ်ကောင်းငါမှန်ကန်သောအရာတစ်ခုခုလုပ်နေတာမဟုတျလော နှင့်အကြံပြုချက်များအပေါ်အတိအကျဘယ်မှာနှင့်မည်သို့ငါကဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးအတိအကျငါအဲဒါကိုထားသလဲ?
1 months ago2တစ်နှစ် #1318 by [email protected]
ငါတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သလား FSX ထိုသို့အလုပ်လုပ်ရန်အဘို့အရှိကြောင့် load P3dv4?
1 တစ်လအကြာ 1 တစ်နှစ် #1328 by rikoooo
သင်ဤအတွက် add-on ကိုရည်ညွှန်းနေကြသနည်း : www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/51/402
ဟုတ်ကဲ့ပါကလိုက်ဖက်မယ့် P3D အဲဒါကို 4-bits Simulator ကိုသုံးပြီးအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးတဲ့ port ကို-ကျော် FS2004 ဖြစ်သကဲ့သို့ယခုအချိန်တွင်များအတွက် v64 ။
0.216 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်